Somaliland: Oo Beenisay War Saxaafadda Kenya Ganacsatada Dalka Ka Baahisay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Oo Beenisay War Saxaafadda Kenya Ganacsatada Dalka Ka Baahisay
Danjirihii hore ee dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) oo ka mid ah Murrashaxiinta u tartamaysa madaxweynenimadda Soomaaliya ee lagu wado inay sannadkan lagu qabto Muqdisho, ayaa socdaal qaatay muddo toddoba maalmood ah ku yimid Somaliland, isagoo ku tamashleeyay oo ku wareegay magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera.
Waxa la soo weriyay in socdaalka siyaasigan uu wadanka ku soo galay fiise uu ka helay laanta socdaalka Somaliland, iyadoo aan la caddeynin sababta ay ninkan ololaha siyaasadeed ku jira ay ugu ogolaatay inuu booqasho ku yimaado Somaliland oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliya ee sida adag u naqdiya qadiyadda madax-banaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidoo kale waxa uu hore u sheegay inuu Soomaaliya oo dhan ku marayo wax uu ugu yeedhay booqasho nabadeed oo uu ku xoojinayo midnimadda Soomaaliya, isagoo socdaalkiisani uu ku noqday siyaasiga kaliya ee fursad u helay inuu ku tax-taxaasho qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka oo uu si qarsoodi ah ugu tabliiqeeyay ololihiisa siyaasadeed, isagoo sawiro iskaga qaaday Huteelka Maansoor ee Magaaladda Hargeysa iyo xeebta batalaale ee magaali xeebeeda Berbera. Mana jiro wax macluumaad ah oo ay ka hayeen dhaqdhaqaaqiisa ciidanka laanta socdaalka iyo hay’adaha kale ee ammaankuba.
Warku waxa uu intaas ku darayaa in siyaasigani uu markii uu dhammeystay hawlihii uu u yimid Somaliland inuu ka dhoofay shalay madaarka Hargeysa.
Taliyaha laanta socdaalka Somaliland Gaashaanle sare Maxamed Cali Yuusuf, oo aanu xalay isku daynay inaanu wax ka weydiino booqashada Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) iyo fiisaha la sheegay inuu xafiiskiisu siiyay ayay noo suurto-geli weyday markii uu qaban waayay telefoonkiisa gacanta.
Geesta kalena afhayeenka wasaaradda Duulista hawadda Mr. Ismaaciil Cali Axmed, oo xalay warbaahinta qaar ka mid ah wax ka weydiisay ayaa sheegay “Ninkaa Maxamed Cali Nuur (Americo) waxuu madaarka Cigaal ku yimi fiiso sharci ah oo u watay, isla markaana markii madaxda madaarku xaqiijiyeen inaanu wax xil ah wakhtigan ka hayn Soomaaliya ayaa loo ogolaaday inuu dalka soo galo.”